ပြီးဆုံးခဲ့ခြင်းများ | YANGON LITERARY MAGAZINE
Posted on April 6, 2017 by Kcmmaung	Leaveacomment
Words by လွမ်းသင့်ဝေ
ဤခရီးကို လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်မှာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ လူတို့၏ သိမှုနယ်ပယ်ဝန်းကျင်က ဥပက္ခာပြုထားသော ကောင်းကင်မှာ ယခု သန့်ရှင်းနေလင့်ကစား ရုတ်ချည်း မိုးတိမ်မဲပြာကာ ထစ်ချုန်းသွားနုိုင်သည်ဟု ဆိုလျှင် လွန်မည်မထင်။ ကောင်းကင်ကို ခိုကပ် ချိတ်ဆွဲနေသော အင်တိုက်အားတိုက် မိုးတိမ်များမှာ တခဏအတွင်း သဏ္ဍာန်ပြောင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်လား။
အရင် တစ်ချိန်က ဖြစ်ခဲ့ဖူး၏။ ရေကန်သို့ သွားပါများ၍ ဖြစ်တည်လာသော မြေလမ်းလေးသည် ထိုအတိတ်၏ ပစ္စုပန်ကဏ္ဍတွင်သာ တည်ရှိခဲ့ရလေပြီ။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းများကြားမှ ခြေရာထင် လမ်းပေါက်နေသော ထိုမြေလမ်းလေးသည် ယခုအခါ ထားရစ်ခဲ့ခြင်းများနှင့်အတူ မြက်ခင်းများကြားထဲ ပျောက်ကွယ်သွားလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
အခါမလပ် မနားမနေ လှုပ်ရှားနေကြသော အိပ်မက်ပုံရိပ်များသည် အတိုင်းအဆ မရှိခြင်း၏ ကောင်းကင်တွင် တိမ်ရောင်စုံကို ပြယုဂ်ထားကာ အလုအယက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြ၏။ အေးစက်သည့် အလင်းတန်းတစ်လျှောက် ကြွေဆင်းကျလာသော ကြယ်အသေကို လတ်ဆတ်မှု အတုိုင်းအတာ လွန်ကဲသည့် သက်တန့်စကားများ အပ်နှင်းခဲ့ဖူးသည်။
စွန့်လွှတ်ရန်သင့်လှသည့် ဟိုတစ်ချိန်က အတိတ်အကြောင်းများက မေ့နိုင်စွမ်း မရှိသေးသော ဦးနှောက်အတွင်းမှ မှတ်သားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် ပြန်လည်မြင်ယောင် တမ်းတမိခြင်းတုို့ ဖြစ်ပေါ်လာကြရပြီ။ သာလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည့် မေ့နိုင်စွမ်းရှိသော ဦးနှောက်အတွင်းမှ မှတ်သားထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း တခါတရံ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ဆုံးနေတတ်ရာ ၄င်းမှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်း၏။
မပြီးဆုံးသေးသော ခရီးတစ်ခုအတွင်း ဖြစ်စဉ်တချို့ ပြီးဆုံးခဲ့ရသည်။ စားပွဲပေါ်မှ သောက်လက်စ ကော်ဖီတစ်ခွက်၏ သတင်းစာတစ်စောင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် ဖတ်လိုက်ရသော ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းနှင့် အမည်တစ်ခုမှာ အတိတ်မှ ပစ္စုပန်ကဏ္ဍတစ်ခုကို လှုပ်နိုးခဲ့လေပြီ။
ထိုအချိန်က တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် နိမ့်ဆင်းပျောက်ကွယ်ဟန် ပြင်နေသော နေမင်း၊ သူနှင့် နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ချိန် ညနေဆည်းဆာ အပါအ၀င် အပေါင်းအပါတစ်ခုနှင့် ပြီးဆုံးမည့်စဲစဲ ဖြစ်စဉ်တစ်ကဏ္ဍတို့ကို နှမြောတမ်းတစွာဖြင့် နိမ့်ဆင်းပုံ အချိန်ပရ၀ုဏ်တစ်ခုကို နှစ်ဦးသား အတူတူ ဆွဲဆန့်ချင်ခဲ့ကြဖူးသည်။
ထိုနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်း၏ အနီရောင်ဆည်းဆာနှင့် အတိတ်မှ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသမျှ အချိန်ကာလတို့မှာ ဦးနှောက်၏ တစ်ခန်းတစ်ထောင့်တွင် စွဲညိ ထင်ကျန်နေဆဲ ဖြစ်သည့်နည်းတူ အချိန်အခါမရွေး နေ့ညမဟူ ပေါ်လာတတ်ရာ လွမ်းဆွေးတမ်းတမှု ဟူသမျှတို့မှာလည်း မဖိတ်ကြားဘဲ တံခါးခေါက် ၀င်ရောက်လာကြပြန်သည်။
ပိုင်ရှင်မဲ့သော တိတ်ဆိတ်ခြင်း အလုံးစုံသည့် ထိုညနေခင်းတွင် တိမ်လွှာများ တောက်လောင် ကွန့်မြူးနေခဲ့ကြသည်။ ရူးသွပ်ခြင်း သဘောဆောင်သည့် လေညှင်းတစ်သိုက်သည် ကန့်သတ်မဲ့ ဦးတည်ရာတို့ဖြင့် နီကြင်ကြင်နှင့် ရုပ်သဘောအရ လှပနေသည့် ကောင်းကင်တစ်ခုိုကုို အဖော်ပြုနေသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိဟန်တူသည်။
သဘာဝကျသည့် စည်းကမ်းချက်များ၏ အတိုင်းအတာ အနေအထားတို့ကြောင့် ညနေခင်းဆည်းဆာချိန်များ လှပသွားသော်လည်း ဘ၀အတိုင်းအတာဟူသည့် ကန့်သတ်မဲ့ အနေအထားတစ်ခုကြောင့် နှစ်ဦးသား ဖန်တီးလိုသော လန်းဆန်းပျော်ရွှင်ဖွယ် အရုဏ်ဦးနှင့် ညနေတို့၏ ဆည်းဆာများမှာတော့ ၀င်သွားသော နေမင်းနှင့်အတူ စည်းချက်မဲ့ ပျောက်ဆုံး လွင့်ပြယ်သွားခဲ့ရသည် မဟုတ်လား။
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မြှင့်တင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မှတ်ထင်ခဲ့သည့် တည်မြဲမှု အမှတ်သင်္ကေတတို့မှာ ပြင်းထန်ပြီး ၀ိရောဓိဆန်သည့် အကြောင်းပြချက်တို့ဖြင့် အနာဂတ်သစ်ကို အသွင်ပြောင်း ယူဆောင်သွားခဲ့ကြလေပြီ။ အဝေးဆုံး၏ အဝေးဆုံးသို့ လွင့်ပါးပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ကြလေပြီ။
‘ထို’နေရာသို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခရီးလွှင့်မိခဲ့ပြန်ပါပြီ။ လေးလံသည့် ခြေလှမ်းများ ရပ်တန့်သွားချိန်အရောက်တွင် မိုးတိမ်ကုို ခူးဆွတ်ကာ လေးရပ်ခွင်ကို အုပ်မိုးနေသော ယခင်က သစ်ပင်မြင့်များမှာ အတော်အတန် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြပါပြီ။ မြက်ခင်းစိမ်းများကြားမှ အတူလျှောက်လှမ်းခဲ့ကြသည့် ခြေရာထင် မြေလမ်းလေးလည်း မြက်ပင်စိမ်းများကြား၌ပင် ဖုန်းလွှမ်း ကွယ်ပျောက်သွားခြင်းနှင့်အတူ ယခင် သစ်ရွက်များကြားမှ ဖြာကျလေ့ရှိသော မျှော်လင့်စဖွယ် နေရောင်ခြည်များမှာလည်း မတည်မြဲခြင်းနှင့် ရက်ရက်ရောရော ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေပြီ။
ကံကြမ္ခာမုန်တိုင်းသည် လူတို့နှင့် မိတ်ပြုချင်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ မနက်ဖြန်၏ ပုံသေကားမကျသော တည်ရှိနေခြင်းသည် ဤရေပြင်နှင့် ဤဥယျာဉ်ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်နှိုးနေဆဲပင်။ မတည်မြဲခြင်း သီဝရီကို ငြင်းဆန်မှု မပြုလိုသော်လည်း သေဆုံးခြင်းကဲ့သို့သော အမြဲတည်ရှိနေမှုများကိုတော့ တခါတရံ မေးခွန်းထုတ်ချင်မိ၏။
မွေးဖွားခြင်းမှ ဆက်ပြီး နိဂုံးသေဆုံးခြင်း ခရီးတလျှောက် ရှင်သန်ခြင်းနှင့် ရုန်းကန်ခြင်းတို့ကို ပူးတွဲကာ သက်သေပြပိုင်ခွင့် သင့်ထံ အပြည့်ရှိပါသည်။ မတည်မြဲမှုများကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဤမြေ၊ ဤခရီး လက်မလွှတ်စတမ်း ချုပ်တည်းကာ ‘ငါ’ ခရီးဆက်ပိုင်ခွင့် တစုံတရာ သင့်ထံရှိကောင်း ရှိသော်လည်း ကြွေကျသွားသော ကြယ်များနှင့် ငိုခြင်းချလာသော မိုးတိမ်တစ်စုတို့ကို သင်သတိပြုမိစေချင်သည်။
သူ၏ ညနေခင်းများမှာ သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ မြေမြှုပ်ပြီးဆုံးခဲ့ရပါပြီ။ အနောက်အရပ်၏ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းသို့ တဖြေးဖြေး ၀င်ရောက်သွားသော နေမင်းကား ည၏ ကြယ်ပွင့် အလင်းစများအဖြစ် ပြိုကွဲအသွင်ပြောင်းသွားမည့် အလားပင်။ ဧကရာဇ်အသွင်ဆောင်သည့် နေရောင်ခြည်များမှာ ပျောက်ဆုံးကွယ်ဖုန်းသွားကြရတော့မည် ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ယောက်၏ အခြားသော ညနေခင်းများကို သေဆုံးစေခြင်းပြုရန် အသင့်ဟန်ပြင်လေပြီ။
သန့်ရှင်း လှပပြီး ကာရန်ညီသည့် စည်းချက်ကိုက် ကောင်းကင်နှင့် ၀န်းကျင်တစ်ခုကို ဟန်ဆောင်မှု မျက်နှာဖုံးများ ခွာချွတ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ချင်သည်။ ရွက်ဟောင်းတို့၏ ကြွေလွင့်ရခြင်းများနှင့် အတူ ရွက်သစ်တို့အတွက် နေရာဖလှယ်ပေးခြင်း လမ်းစဉ်တို့ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ချင်သည်။
နှင်းခသည့် ဆောင်းလ၏ ကောင်းကင်ပ၀ါကြီးဖြင့် အစိုးမရသော နှလုံးသား အမှောင်ဖက်ခြမ်းကို အစားထိုး အလှဆင်ကြည့်ချင်သည်။ အစိုးမရသော ဖြူစင်သည့် နှလုံးသားဖက်အခြမ်းကို ဖြည့်တင်းဖို့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသည့် သတိနှင့် အသိတရားတို့ဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှာဖွေကြည့်ချင်သည်။ ခေါင်း၊ပန်း လှန်ခြင်းထက် များစွာသေချာသော ပစ္စုပ္ပန်တွင် မရေရာခြင်း၏ တစ်မိနစ်ထက် သေချာခြင်း၏ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်မိချင်သည်။
နှလုံးသား၏ အခန်းများတွင် သင်နေရာတချို့ ယူထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဦးနှောက်၏ အတွေးများတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြီ။ သွားနှင့်ပါ။ မတည်မြဲမှုဘောင်အတွင်း ကျန်ရှိနေခဲ့မည့် ကောင်းမွန် သန့်ရှင်းသော နှင်းခပ၀ါ တစ်ထည်ကို ဖွေရှာကာ ကာရန်ညီ ရှုသွင်းရမည့် သန့်ရှင်းမှုဝါဒတစ်ခုကို ထွက်ခွာခြင်း လမ်းဆုံတွင် တည်ဆောက်ရင်း တည်မြဲခြင်း၏ အဆုံး၌ရှိသော နိဂုံး အနာဂတ်တစ်ခုတွင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း တည်ငြိမ်စွာ ထွက်ခွာခဲ့ပါမည်။ တွေ့ဖို့ မသေချာသော်လည်း တူညီသော ဒီလမ်းမမှပင် ထွက်ခွာလာဦးမည်ပင်…။
Tags: art, essay, exploration, life, myanmar, nature, writing, yangon literary magazine. Bookmark the permalink.
Previous post ← A Holistic Education
Next post Out in the Open: Chriz Naing, Filmmaker →